စိတ်ကြွစိတ်ပိုင်းဖြတ်ခြင်းနှင့် amygdala dopamine D2 အမျိုးအစားမက်သာဖီတမင်းအသုံးပြုသူများအတွက်ရရှိနိုင်သောရရှိမှု (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
စိတ်ကြွဆေးသည်အသုံးပြုသူများ (2) တွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှု dysregulation နှင့် amygdala dopamine D2016-type အမျိုးအစားအဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု
မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2016 ဖေဖော်ဝါရီ 12။ pii: S0376-8716 (16) 00059-4 ။ Doi: 10.1016 / j.drugalcdep.2016.01.029 ။
Okita K သည်1, Ghahremani DG2, အခွန်ဆောင်သူ DE3, Robertson က CL4, ဒင်း AC အ2, Mandelkern MA5, လန်ဒန် ED6.
စိတ်ကြွဆေးကိုအသုံးပြုဖို့သူအလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနာတာရှည်စိတ်ခံစားမှုနှင့် dopaminergic neurochemical လိုငွေပြမှုပြ။ အဆိုပါ amygdala စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍရှိပြီး dopaminergic innervation အားလက်ခံတွေ့ဆုံသော်လည်း, နည်းနည်းဤဒေသတွင် dopamine ဂီယာစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းကိုအထောက်အကူပြုရန်ဘယ်လိုလူသိများသည်။ ဤသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးစိတ်ကြွဆေးမှီခိုဘို့ DSM-IV စံတွေ့ဆုံခဲ့သူကိုဘာသာရပ်များအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းအကဲဖြတ်ဖို့, စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများနှင့် amygdala အတွက် D2-type အမျိုးအစား dopamine အဲဒီ receptor ရရှိမှုအတွက်အခက်အခဲများစွာ Self-အစီရင်ခံစာများအကြားဆက်ဆံရေးအဘို့စမ်းသပ်ဖို့ရည်ရွယ်။
ကိုးဆယ့်လေးစိတ်ကြွဆေး-သုံးပြီးနှင့် 102 ကျန်းမာ-ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ Emotion စည်းမျဉ်းဥပဒေစကေး (DERS) အတွက်အခက်အခဲများပြီးစီးခဲ့; စိတ်ကြွဆေးအသုံးပြုသောသောသူတို့၏အမျိုးအ 33 သည့်စွဲလမ်းမှု Severity Index (asi) ပြီးစီးခဲ့သည်။ 27 စိတ်ကြွဆေး-အုပ်စုတစ်စုနှင့် 20 ထိန်းချုပ်မှု-အုပ်စုတစ်စုဘာသာရပ်များ၏အစိတ်အပိုင်းအစု [အတူ positron ထုတ်လွှတ် tomography ပြီးစီး18အလားအလာ (BP binding အဖြစ်တိုင်းတာ D2-type အမျိုးအစား dopamine အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု amygdala assay ဖို့က F] fallypride,ND).
methamphetamine အုပ်စုသည် DERS စုစုပေါင်းရမှတ် (p <0.001) တွင်ရရှိသော DERS စုစုပေါင်းရမှတ်နှင့် methamphetamine အုပ်စုရှိ ASI ရှိဆေးဝါးပေါင်းစပ်ရမှတ် (p = 0.02) နှင့်အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ DERS စုစုပေါင်းရမှတ်သည် amygdala BP နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ND နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများနှင့်သင်တန်းသားများ၏ပေါင်းစပ်အုပ်စု (ပေါင်းစပ်: r = 0.331, p = 0.02), နှင့်အဖွဲ့များကိုဒီဆက်ဆံရေးအတွက်ကွာခြားခဲ့ပါဘူး။
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ဖြစ်နိုင်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်လူ့အပြုအမူဆိုင်ရာပြဿနာများအထောက်အကူပြုစိတ်ကြွဆေးသုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းနှင့်အတူပြဿနာများကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ သူတို့ကအစ amygdala အတွက် D2-type အမျိုးအစား dopamine receptors ကျန်းမာစိတ်ကြွဆေး- အသုံးပြု. နှစ်ဦးစလုံးဘာသာရပ်များအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းကိုအထောက်အကူပြုကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Amygdala; Dopamine; စိတ်လှုပ်ရှားမှု dysregulation; စိတ်ကြွဆေး; ပေ; [(18) က F] Fallypride